စက်မှုဆိုင်ကလုန်းအိတ်ဖုန်မှုန့် remover China Manufacturer
သွေးခုန်နှုန်းအိတ်ဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေး,Ndustrial Pulse Bag အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး,စက်မှုသတ္တုဗေဒဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေး
Botou Youjian Environmental Protection Equipment Co. LTD. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer Main Mark: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်: 11% - 20% Cert: FAMI-QS, GB, ISO9001, ISO9002 ဖေါ်ပြချက်: သွေးခုန်နှုန်းအိတ်ဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေး,Ndustrial Pulse Bag အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး,စက်မှုသတ္တုဗေဒဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေး
Home > ထုတ်ကုန်များ > အိတ် Filter ကို > စက်မှုဆိုင်ကလုန်းအိတ်ဖုန်မှုန့် remover
 စက်မှုဆိုင်ကလုန်းအိတ်ဖုန်မှုန့် remover
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းဖုန်မှုန့်စုဆောင်း၏အလုပ်လုပ်ကိုင်နိယာမဖြစ်ပါသည်: မြေမှုန့်ဓာတ်ငွေ့အောက်ပိုင်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်၏ပွင့်လင်းအနားကွပ်ခြင်းအားဖြင့်စစ်ထုတ်အခန်းထဲကထဲသို့ဝင်သည် coarser မှုန်ပြာဘင်သို့တိုက်ရိုက်လဲမြေမှုန့်ဓာတ်ငွေ့ filter ကိုအိတ်မှတစ်ဆင့် filtered ဖြစ်ပါတယ်, အ ဖုန်မှုန့်အိတ် table ထဲမှာသိုထားသည်ပိုက်ကွန်ဓာတ်ငွေ့လေထုသန့်ရှင်းရေးအခန်းထဲသို့အလေးအိတ်ရှောက်သွားသည်နှင့်လေကောင်းလေပန်ကာအားဖြင့်လေထုထဲသို့ဆင်းသည်။ အဆိုပါ filter ကိုအိတ်ရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာမြေမှုန့်ကိုအဆက်မပြတ်တိုးမြှင့်သည်ပရိုဂရမ်ကိုထိန်းချုပ်ကိရိယာအလုပ်လုပ်စတင်ခဲ့ပြီးနှင့်သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်ဟာ compressed လေကြောင်းမှုတ်စေတဦးတည်းအားဖြင့်တဦးတည်းဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် nozzle ကနေတဆင့်ဖုန်မှုန့်မှုတ်, ဒါကြောင့်သီးသန့်စစ်ထုတ်ရန်အိတ်သောအခါ ရုတ်တရက်ကျယ်ပြန့်နေပါတယ်။ ပြောင်းပြန်စီးဆင်းမှု၏အရေးယူမှုအောက်, အိတ် table ၏ဖုန်မှုန့်အလျင်အမြန် filter ကိုအိတ်ထဲကနေကွဲကွာနေသည်နှင့်ပြာမှုန်ဘင်သို့ကျရောက်လျက်, ဖုန်မှုန့်မြေမှုန့်ကယ်ဆယ်ရေးအဆို့ရှင်များကဆေးရုံကဆင်းသည်။
မြေမှုန့်စုဆောင်းအဓိကအားဖြင့်အထက် box ကိုအလယ်တန်း box ကိုပြာ Hopper တွေလည်းလေထုလက်ရှိခွဲဝေမှုပိုက်, bracket က filter ကိုအိတ်, ဆေးထိုးစက်ကိရိယာနှင့်ပြာချ device ကိုဝင်ပေါက်ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်။ မြေမှုန့်စုဆောင်း၏ဝင်ပေါက်များမှဖုန်မှုန့်ဓာတ်ငွေ့လွတ်လပ်သောအခန်းပြာ Hopper တွေလည်းဝင်များနှင့်ဖုန်မှုန့်များ၏ကြီးမားသောအမှုန်ကွဲကွာနှင့်တိုက်ရိုက်ပုံးလမ်းညွှန်ကိရိယာ၏လွှဲအောက်တွင်ပြာရေပုံးထဲသို့ကျ, နှင့်ဒဏ်ငွေဖုန်မှုန့်အညီအမျှထဲသို့ဝင်နေသည်နေကြတယ် ဗဟိုအကွက်ထဲသို့နှင့် filter ကိုအိတ်၏အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်စုပ်ယူနိုင်ပါသည်, နှင့်သန့်ရှင်းသောဓာတ်ငွေ့ filter ကိုအိတ်အထက်ပိုင်းသေတ္တာထဲသို့ဝင်နှင့် Off-line ကိုဆို့ရှင်နှင့်အဆို့ရှင်မှတဆင့်ဖြတ်သန်းပါတယ်။ အဆိုပါအိပ်ဇောပိုက်လေထုထဲသို့ဆင်းသည်။ အဆိုပါ filter ကိုအခြေအနေပေါ်တတ်သကဲ့သို့, filter ကိုအိတ်အပေါ်မြေမှုန့်စုဆောင်းသောပစ္စည်းကိရိယာများခုခံ (ယေဘုယျအားဖြင့် 1500Pa အဖြစ်သတ်မှတ်ထား) ကိုကန့်သတ်ခုခံတန်ဖိုးကိုရောက်ရှိလာသောအခါ ပို. ပို. , လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်အဆိုပါ setting ကိုအစီအစဉ်နှင့်လေထုအရသိရသည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် မှုတ်ခြင်းနှင့်မှုတ်ထိန်းချုပ်မှု device ကိုနောကျ setting ကို program ကထွက်ယူသွားတတ်၏အလိုအလျောက် differential ကိုဖိအား setting ကိုတနျဖိုးဒါမှမဟုတ်ပြာသန့်ရှင်းရေးအချိန် setting ကိုတန်ဖိုးအတိုင်း Off-line ကိုအဆို့ရှင်ဖို့အပိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ compressed လေကြောင်း၏ချက်ချင်းဆေးထိုးသည့် filter ကိုအိတ်တိုးအတွက်ဖိအားစေသည်, နှင့် filter ကိုအိတ်အပေါ်မြေမှုန့်ပြာရေပုံးမှ (ဒဏ်ငွေဖုန်မှုန့်ကိုလည်းနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်သန့်စင်နိုင်ပါတယ်ပင်လျှင်) ချွတ်ချောက်ချားသည်မြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးယန္တရားဆေးရုံကဆင်းသည်။
ဖန်ဖိုင်ဘာဖုန်မှုန့်စုဆောင်းဘို့ filter အိတ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက်မှု filter ကိုထည်သီးသန့်စစ်ထုတ်ရန်အိတ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
non-ယက်ထည် filter ကိုအိတ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: သွေးခုန်နှုန်းအိတ်ဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေး , Ndustrial Pulse Bag အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး , စက်မှုသတ္တုဗေဒဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေး , သွေးခုန်နှုန်းအမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး , သွေးခုန်နှုန်းဓါတ်ငွေ့ Box ကိုအမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး , သွေးခုန်နှုန်းအိတ်အမျိုးအစားဖုန်မှုန့်အိတ် , သစ်သားဖုန်မှုန့်စုဆောင်းခြင်းဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံသူ , စက်မှု Filter ဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေး